“Waxaan Ku Baaqaya Dagaal Ka Dhan ah Al Shabaab” Madaxwaynaha Dalka Kenya | Raadgoob
“Waxaan Ku Baaqaya Dagaal Ka Dhan ah Al Shabaab” Madaxwaynaha Dalka Kenya
Madaxweynaha Dowladda Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay howlgal lagu ka dhan ah Ururka Al-shabaab-ka ka dhex dagaalama gudaha dalka Kenya kaddib markii uu kulan la qaatay hay’addaha Ammaanka dalka Kenya.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ku ku dhawaaqay in dowladda Kenya ay sameysay xarun loogu tala galay in lagu Keydiyo dadka soo galiya gudaha Kenya ee ka imaanaya Soomaaliya si aysan ugu soo dhex dhuuman Al-shabaab.
Hay’addaha Ammaanka iyo guddoomiyayaasha gobollada ayuu ku amray in ay fuliyaan howlgallo joogto ah oo lagula dagaallamaayo Al-shabaab.
Madaxweynaha Kenya ayaa sheegay in haddii ay qabtaan Al-shabaab aysan xiri doonin isagoona sheegay in ay dili doonaan ka dibna ay aasi doonaan.
Kenyatta ayaana dadka Kenyaanka ah uga digay in ay gur-yahooda ay ku qariyaan dagaalyahana Al-Shabaab.
Isagoona ugu baaqay dadka degan magaalo xeebeedka Lamu in ay la shaqeeyaan ciidamada amaanka si looga hortago weerarada ay geysanayaan Alshabaab.
Baaq madaxweynaha ayaa imanaya xili dhawaan Al-Shabaab weerar Khasaare badan dhaliyay ay ku qaadeen Hoteel ku yaalla Magaalada Nairobi,halkaasoo ay ku dileen 21 qof , sidoo kalena ay ku dhaawacmay ku dhawaad 40 qof.